नयाँ दैनिक | बिचार/ब्लग बिचार/ब्लग – Page2– नयाँ दैनिक
यसरी देशले काँचुली फेर्दैन
विकसीत देशहरुको इतिहास हेर्दा समृद्धिका मौलिक चरित्रहरु देख्न सकिन्छ । कुनै व्यबस्था, प्रणाली वा वाद कहि पनि शास्वत भेटिंदैनन् । गणित र ...
एउटा स्वाधीन देश आज बिदेशीको कठपुतली हुन पुगेको छ। यसका कारक त...
‘विद्रोही विप्लव’लाई सत्तारुढ नेताको खुल्लापत्र
तपाईंको वक्तव्य जुन माध्यमबाट मैले प्राप्त गरेँ त्यही माध्यमबाट यो पत्र तपाईंले पाउनु हुनेछ भन्ने म आशा गर्दछु ।
तपाईंले नेतृत्व गरेको नेकपामाथि प्रतिबन्धको जुन प्रसंग छ, कम्तिमा राजनैतिक रुपमा म त्यसको विरोध गर्दछु र तपाईंहरुसँग राजनैतिक नै व्यवहार गरियोस् भन्ने अपेक्षा राख्दछु । तपाईं पचाउनुहुन्छ भने म तपाईसँग क्रान्तिका केही आधारभू...
मोदीलाई हराउने नारा : ‘चौकीदार’ खबरदार !
भारतमा १७ औं लोकसभा चुनावको चर्चा चुलिंदै छ । सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी चुनाव जित्न सबै हतकण्डा प्रयोग गरिरहेको छ भने विपक्षीहरू यसपाला मोदीलाई हराउनै पर्ने भनिरहेका छन् ।
मोदी २०१४ को चुनावमा चायवालाको रूपमा चर्चामा थिए भने यसपाला चौकीदारको रूपमा चर्चामा आएका छन् । मूल मुद्दा परिदृश्यबाट हराएका छन् । सन २०१४ मा वाचा गरिएका कति मुद्...
नेपालमा फेरि युद्ध सम्भव छ ? (विश्लेषण)
यतिबेला सर्वत्र चर्चा छ, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’को । चर्चासँगै उनी सबैभन्दा जोखिममा पनि छन् । किनकि उनले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई सरकारले प्रतिवन्ध लगाएको छ । प्रचलित कानुन अनुसार पक्राउ परे भने उनलाई जन्मकैदको सजाय हुने छ ।
विप्लवका नेता/कार्यकर्तालाई जहाँ देख्यो त्यहीँ घुँडामुनि गोली हान्ने सरकारको आदेश छ ।...
धूलो र जाममा यहाँलाइ स्वागत छ !
शहर देख्ने रहरले देशको राजधानी आउनु भएका यहाँ सबैलाइ स्वागत गर्न पाउँदा यो शहर गौरवान्वित छ । तपैँको धोको पूरा हुँदै गर्दा हाम्रो शहर यसरी सबैको रहरको शहर बनाउन योगदान दिनुहुने कृपालुप्रति विशेष आभार त दिनैपर्यो, हैन ? यस्ता कुरामा लोभी पनि त हुनु भएन ।
सनातनी धर्म र ‌वैदीक दर्शनको चाकडीमा यत्रो समय व्यतित गर्ने नेपालीजनलाई यति ‘स्या...
पेरिस कम्युन : पहिलो समाजवादी सत्ता
पेरिस फ्रान्सको राजधानी । श्रमजीवि मजदुरहरुले सत्ता हातमा लिएको आज १४८ वर्ष पुरा भएको छ । १८ मार्च देखि २८ मे १८७१ सम्म जम्मा ७२ दिन मात्र टिकेको उक्त कम्युनको महत्व आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । पेरिस कम्युन दिवसको सन्दर्भमा नेपालमा पनि छलफल गर्नु सान्दर्भिक नै छ । मैले मार्क्स, एंगेल्स र लेनिनका निष्कर्षहरुलाई सजिलो पारि राख्ने जमर्को गरेको...
आज म काइला काकाका अनौठा कुरा यहाँहरुसँग साट्दैछु है प्रिय पाठकहरू !
काका भन्नुहुन्छ— हामी सबैजसो मर्ने भयले पीडित बनिरहन्छौं । आखिर आलोपालो मूलबाटो त्यही हो भन्ने जानकारी सबैलाई छ नै । बाँच्नैलाई धौ-धौ भएकाहरू पनि आत्तिन्छौं मृत्युदेखि । हामीलाई थाह छ यो प्राकृतिक नियम नै हो, तथापि सापको मुखमा आधा शरीर पसिसकेको भ्यागुताले पनि अगाडि फे...
सिके राउतसँग प्रचण्डलाई दाँज्न मिल्छ ?
नेपालको राजनीतिमा अनपेक्षित र अपत्यारिला दृश्यहरु एकपछि अर्को देखिँदै आएका छन् । नेपालको राजनीतिक आकाश हेरेर मौसमको पूर्वानुमान गर्नै सकिँदैन । घाम चर्किँदाचर्किँदै पानी पर्छ उतिबेलै । पानी पर्दापर्दै अनयासै घाम लाग्न थाल्छ । झरि– वादल, हावा–हुरी, घाम–पानी, गड्याङ–गुडुङले पूर्वानुमानसँग मेल खाँदैन । यसो भनौँ, पोखराको मौसमजस्तै छ नेपालको राजनी...
नदेखे झैं गरिएका दुई मुद्दा
विगत दुई महिनामा हामीले दुइटा गतिला खोजी रिपोर्टिङहरू पढ्न पायौं। त्यसमा एउटा सेतोपाटीले गरेको तपस्वी भनिने रामबहादुर बमजनको आश्रममा भएका आपराधिक क्रियाकलापको खुलासा थियो भने अर्को खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) ले गरेको वैदेशिक लगानीका नाममा भइरहेको आर्थिक चलखेलको विस्तृत विवरण। यी दुवै रिपोर्टिङमा थप खोज्नुपर्ने वा ‘फलोअप’ गर्नुपर्ने पक्षहर...
जनयुद्धको जगमा उभिएको गणतन्त्र
हिजो २४औँ जनयुद्ध दिवस । जसलाई सत्तारुढ नेकपाले देशव्यापी रुपमा मनायो । विगतमा दुई विपरीत ध्रुवमा उभिएका एमाले र माओवादी पार्टीबीच एकता भई संयुक्त रुपमा जनयुद्ध दिवस मनाउनु आफैँमा ऐतिहासिक कदम हो । माओवादी जनयुद्धको जगमा भएको यो युगान्तकारी परिवर्तन सम्मान र इतिहासप्रतिको साझा अपनत्वलाई दर्शाउँछ ।
जनयुद्ध आफैँमा विशिष्ट राजनीतिक कदम...
जनयुद्धका ति दिनहरु (सन्दर्भ : जनयुद्ध दिवस)
कम्तिमा १०–१५ वर्ष त पक्कै बस्नु पर्ला भन्ने एउटा ढुक्कता र योजनाबद्ध दिनहरु बिताउने सोंचसहित जेल जीवन बिताइदै थियो तर आकस्मिक रुपमा पहिलो वार्ता कालमा जेलबाट रिहाइ भइयो ।
२०५८ सालको कुरा हो । ४ वर्ष ६ महिना जेल बसेर निस्कदा करिब ८० हजार रुपैँया जम्मा भएको थियो मसँग । यो पैसा एक नेपाली युवाले २ वर्ष अरब बसेर कमाए बराबरको थियो त्यतिबेल...